Coronavirus sy saka: azony atao ve ny mamindra ny aretina aminao? | Noti saka
Raha ny filazan'ny WHO amin'izao fotoana izao dia tsy misy porofo manamarina fa ny biby fiompy toy ny alika sy saka dia voan'ny Covid-19 ny olombelona. Ka raha manana biby fiompy ao an-tranonao toy ny saka ianao, Tsy mila manala azy ianao na mieritreritra fa loza mitatao amin'ny fahasalamanao na amin'ny fianakavianao izany, ny biby dia tsy afaka mamindra anao amin'ny coronavirus, mba hahafahanao milamina amin'izany.
Na izany na tsy izany, etsy ambany izahay dia hanazava ny fepetra tokony horaisinao ho an'ny fiarovana ny saka sy ny anao.
1 Tsara hatrany ny mitandrina
2 Torohevitra ho an'ny fianakaviana manana biby fiompy
2.1 Fepetra fisorohana ankapobeny ho an'iza
2.2 Fepetra ankapobeny ho an'ny olona manana biby fiompy na inona na inona coronavirus
2.3 Fepetra ankapobeny ho an'ireo marary coronavirus izay manana biby fiompy
2.4 Fepetra ankapobeny ho an'ireo olona izay nanaporofo fa voan'ny coronavirus fa tsy maintsy mitazona ny biby fiompy ao an-trano
Tsara hatrany ny mitandrina
Ny fihetsika nohavaozina dia avy amin'ny alika voan'ny aretina hita any Hong Kong. Nizaha toetra tsara ity alika ity taorian'ny nijanonany tamin'ireo tompony izay tratran'ny virus. Ny alika dia tsy nampiseho famantarana ara-pitsaboana ny aretina, araka ny a tatitra an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny fahasalaman'ny biby. Tsy misy porofo manamarina fa ny alika na saka dia mety hanaparitaka aretina na koa ny aretina dia mety hahatonga ny biby harary, hoy ny fikambanana, na dia mety hitarika fikarohana vaovao aza ny fikarohana hafa.
Nanoro hevitra ireo tompon'ompin'omby voan'ny aretina na mora voan'ny virus coronavirus mba tsy hifandray akaiky amin'ny biby fiompy sy hanana mpikarakara biby hafa ao an-trano. Raha tsy maintsy mikarakara ny biby fiompinao ianao dia tokony hihazona fomba fidiovana tsara ary manaova sarontava tarehy raha azo atao.
Torohevitra ho an'ny fianakaviana manana biby fiompy
Ireto ny sasany amin'ireo tolo-kevitra lehibe indrindra raha manana saka (na alika) ianao ao an-trano mandritra ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka iray manontolo izay mahatonga ny aretin'ny Coronavirus (COVID-19). Manome anao ireto torohevitra ireto izahay noho ny hatsaram-panahin'ny oniversite ofisialin'ny mpitsabo biby any Madrid sy ny oniversite Complutense any Madrid.
Nohazavain'izy ireo voalohany fa tsy misy porofo ara-tsiansa milaza fa mamindra ny virus coronavirus ny biby, fampahalalana izay tsy isalasalana fa mamela ny tompon'ireo biby ireo ho tony kokoa, indrindra ireo alika mivoaka mitsangatsangana ary mikitika ny zava-drehetra sy ny saka. trano. Hiresaka momba ireo fepetra nolazainao izahay mba handraisana izany.
Fepetra fisorohana ankapobeny ho an'iza
Voalohany dia miresaka momba ny fepetra ankapobeny ho an'ny rehetra izy ireo, mba handinihana ireto manaraka ireto:
Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao
Fanalavirana ny fiaraha-monina
Saronana ny kiho amin'ny vavanao rehefa mikohaka
Aza mikasika ny maso, orona ary / na vava
Fepetra ankapobeny ho an'ny olona manana biby fiompy na inona na inona coronavirus
Ireo fepetra tokony horaisina ireo dia tsy maintsy tanterahina foana, na inona na inona ny valanaretina coronavirus:
Rehefa avy nikasika ireo biby ianao dia sasao amin'ny savony sy rano ny tananao.
Rehefa avy nikasika ireo biby ianao dia aza mikasika ny oronao, ny masonao ary / na ny vavanao.
Fepetra ankapobeny ho an'ireo marary coronavirus izay manana biby fiompy
Raha tratry ny aretina Coronavirus ianao ary manana biby fiompy, zava-dehibe ny hanarahanao ireto fepetra manaraka ireto:
Soso-kevitra ny hamela olon-kafa vonjimaika ny fikarakarana ny biby fiompinao. (Nefa aza ilaozana izy ireo, tsy omena tsiny izy ireo ary anisan'ny fianakavianao koa izy ireo!).
Aza avela miaraka amin'ny mpikarakara ny fitaovana mahazatra mahazatra.
Raha tsy azo ny kojakoja vaovao, ireo izay ampiasain'ny biby fiompy dia tokony ho voa tanteraka.
Fepetra ankapobeny ho an'ireo olona izay nanaporofo fa voan'ny coronavirus fa tsy maintsy mitazona ny biby fiompy ao an-trano
Ireo fepetra ireo dia natao ho an'ireo olona rehetra izay indrisy nanaporofo tsara fa voan'ny coronavirus izy ireo fa tsy maintsy manohy mitazona ny biby fiompy miaraka aminy any an-trano mandritra ny fotoana mahasitrana azy ireo, satria tsy hanana olon-kafa hikarakara ny saka na biby hafa izy ireo. , toy ny alika:
Alohan'ny handehananao any amin'ny dokotera dia miantso an-telefaona mba hampahafantarina anao ny fomba hirosoana amin'ity toe-javatra ity.
Manaova sarontava foana eo imason'ny biby.
Na dia sarotra aza izany dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalaman'ny orika na ny kanininao ny fisorohana ny fifandraisana mivantana.
Sasao matetika ny tananao.
Fepetra tena mahaliana ireo ho fantatry ny olona rehetra. Avelanay eo ambanin'ilay sary ianao izay mamintina ireo fampahalalana rehetra ireo mba hanananao an'io amin'ny fomba hita maso kokoa, ary koa hanononanao azy ary azonao apetraka amin'ny toerana hita maso. tsindrio eto mba hahita azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Coronavirus sy saka: azony atao ve ny mamindra ny aretina aminao?
Rahoviana no hanome saka ny zanaka alika?